Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.2.7 Mmetuta
Ahụ ike mkpuchi na ụlọ ọrụ nwere ihe ọmụma zuru ezu banyere nlekọta ahụ natara site ahịa ha. Nke a na ozi nwere ike a ga-eji dị mkpa nnyocha banyere ahụ ike, ma ọ bụrụ na ọha na eze ya nwere ike nwere ike iduga obi ojoo (eg, ihere) na ụba na ihe ojoo (eg, ọnwụ nke ọrụ). Anya n'ebe pụrụ iche, ọtụtụ nnukwu data isi mmalite nwere ihe ọmụma bụ mmetụta ọsọ ọsọ. The mwute na uwa nke a ọmụma bụ akụkụ nke mere na nnukwu data isi mmalite na-emekarị ka keerughi (akọwara n'elu).
Otu ụzọ na-eme nnyocha anwa obibi ọnọdụ a na-edepuchaala mata datasets na-enwe mwute ozi. Ma, dị ka m ga-egosi na zuru ezu n'Isi nke 6 (Ethics) nke a ji kpọrọ ihe ejedebeghị na ụzọ na-adịghị n'ọtụtụ ebe ekele ma na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị.
Ná mmechi, nnukwu data isi mmalite nke taa (na echi) n'ozuzu nwere iri e ji mara. Ọtụtụ n'ime ndị ezi Njirimara-big, mgbe niile-na, na nonreactive-abịa site eziokwu na dijitalụ afọ ụlọ ọrụ na ndị ọchịchị na-enwe ike na-anakọta data na a ọnụ ọgụgụ na bụ ekwe omume na mbụ. Na, ọtụtụ n'ime ndị ọjọọ Njirimara-ezughị ezu, keerughi, na-abụghị nnọchiteanya, ịkpafu, algorithmically ihere, keerughi, unyi, na enwe mmetụta ọsọ ọsọ-abịa site eziokwu ahụ bụ na data na-adịghị anakọtara site na-eme nnyocha maka nnyocha. Ịghọta àgwà ndị a na-a dị mkpa nzọụkwụ mbụ na-amụta na nnukwu data. Na, ugbu a anyị na-atụgharị aka mee nnyocha azum anyị nwere ike iji na a data.